Calligra 2.9.7, mukwikwidzi weLibreOffice ari kutora pasi nekuwedzera pasi | Linux Vakapindwa muropa
Calligra 2.9.7, mukwikwidzi weLibreOffice ari kutora pasi nekuwedzera pasi
Isu tatova neinowanikwa iyo itsva vhezheni yeKDE suite, Calligra 2.9.7. Suite ine makuru ekugadzirisa uye zvimwe zvitsva maficha, kunyanya mukutungamira kwezvirongwa zvinoumba izvi suite. Iyo spreadsheet, Kexi, maneja wedhatabhesi uye Krita ndiwo mashoo akachinja zvakanyanya mukati mechazvino vhezheni yebazi 2.9.
Ispredishiti yakavandudza zvakanyanya maererano nekubata, ikozvino kusarudza nekupinda data muCalligra 2.9.7 spreadsheet iri nyore uye isinganetsi. Zvakare iwo ekupedzisira mifananidzo akagadziridzwa kuve akaenzana saizi yemapikisheni gumi nemana.
Kexi akachinjawo zvimwe zvinhu nemabasa senge kuvandudzwa kwe kupinza ma csv mafaera kana kugadzirisa kiyi. Pamusoro pezvo, dambudziko rakaita kuti mibvunzo yakaitwa nechisimba ichengetwe pasina kupa imwe nzira yekuvhara pasina kusevha yagadziriswa.
Calligra 2.9.7 ichave yekupedzisira vhezheni kusvika inotevera vhezheni 3
Asi Krita ingangodaro chirongwa chakange chiine basa rakanyanya sezvo chisina kungogadzirisa zvinopfuura zana nemakumi mashanu bugs zvakare yakagadzirisa kudyidzana neGimp, chimwe chinhu chakakosha kune avo vanoita basa rakawanda kupfuura Photoshop. Uye zvakare, Krita anovandudza shanduko uye uchishandisa psd mafaera, chimwe chinhu chisati chakafanana nePhotohop pachayo asi chakavandudza zvakanyanya uye chichaenderera nekuvandudza.
Calligra 2.9.7 ikozvino inowanikwa yeGnu / Linux uye yeWindows. Imwezve nzira yekudyidzana suite yeMicrosoft. Nekudaro, kudzamara inotevera vhezheni, kusvikira vhezheni 3.0 hauzoone shanduko huru muzvirongwa saka kana iwe usina kana dambudziko neCalligra, zvakanaka kumirira inotevera vhezheni ichabuda mukupera kwegore rino sezvakatsanangurwa pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Kune avo vanoshandisa dhatabhesi, zvinogona kudaro Calligra 2.9.7 isarudzo iri nani pane mamwe masutu ehofisi sezvo kuenderana kwayo neHofisi kuri kukuru, zvisinei, ese maCalligra uye ese mapurogiramu anoinyora ndeye Mahara Software kuti tikwanise kushandisa, kuyedza uye kusarudza pasina dambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Calligra 2.9.7, mukwikwidzi weLibreOffice ari kutora pasi nekuwedzera pasi
Ini ndinoda calligra, uye yakanaka suite yekde.
Ana bhero akadaro
Kushungurudzika kwakanaka, asi iwo mameseji mabhokisi ane iwo magwaro sekunge kuti anoverengera iwo, pamwe neakanyanya mafuta mavara asingabvumire kutsauswa haana maturo. Pasina kutaura iro turu yekushandisa iyo inodya kumusoro hafu yechidzitiro.
Handizive, handina kugutsikana. Ini ndinoda LO, inoita senge "yevakuru" uye ini ndinogona kuve nemagwaro maviri pachiratidziro panguva imwe chete, pasina mapurani akaiswa zvishandiso.
PS: Ndine hurombo nezve chiperengo, asi ndiri kuyedza KDE 5 uye maaccents amira kushanda. : - / Maitiro andinovenga kuti rese software yekuvandudza inofanirwa kuitwa muChirungu ...
Pindura Ana Bell
Debian 8.2 inosunungurwa
Nethogs: tarisa anoshandisa yako network bandwidth